တရုတ် SMD3030 အထည်အလိပ်အကွက်များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် LED backlit Lattice Strip - DiGuang
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > LED မီး Box ကိုအလင်းရောင် > နောက်ခံအလင်းရောင် > SMD3030 အထည်အလိပ်အလင်း Box အတွက် Backlit ရာဇမတ်ကွက် LED
SMD3030 ထည်အလင်း box များအတွက် backlit ရာဇမတ်ကွက် LED
This SMD3030 ထည်အလင်း box များအတွက် backlit ရာဇမတ်ကွက် LED is specialize for light box light source.
အမျိုးမျိုးသောအရောင်အပူချိန်, CRI, LED ချစ်ပ်များနှင့်အရှည်ရွေးချယ်မှုများကိုကမ်းလှမ်း။ ၈၀% စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုကိုရိုးရာမီးချောင်းဆီ၊ CE / RoHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်ထောက်ခံမှုစိတ်ကြိုက်ရရှိမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LED backlight light strip ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်သို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရုတ်နိုင်ငံတွင်သင်၏ရေရှည်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက် 14pcs SMD3030 LED
1150 x ကို 17 x ကို 1.0
၁။ SanD ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော LED SMD3030 ချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုသည်။
2. DC12V / 24V အနိမ့်ဗို့အားဘေးကင်းလုံခြုံရေး power supply;
၃။ ထည်အလင်း Box တွင် LED Backlit Lattice Strip, အပူနိမ့်၊ နှေးခြင်းမရှိဘဲလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်သည်။
၁၇.၅ ဒီဂရီ PMMA မှန်ဘီလူး၊ ပျမ်းမျှအလင်းဖြန့်ဝေမှု၊ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မရှိ၊
၅။ မြင့်မားသောအပူကူးမှု Aluminum PCB board;
၇.၅ - ၁၅ စင်တီမီတာအနက်ရောင်ထည်အလင်းသေတ္တာအတွက်အကောင်းဆုံး။
3. Stretch မျက်နှာကျက်, နံရံဆေးကြောမီးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်
၄။ နံရံအလှဆင်ခြင်း၊ မြေအောက်ရထားဘူတာ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နှင့်အခြားကြော်ငြာမီဒီယာမီးသေတ္တာအလင်းရောင်
Diguang LED သည် Fabric Light Box ထုတ်လုပ်သူများအတွက် SMD3030 LED Backlit Lattice Strip တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် LED Backlit Lattice Strip နှင့်အရောင်းအဖွဲ့နှင့်အတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ရှိသည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ရန်၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်, တရုတ်, စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ စျေး၊ အရည်အသွေး၊